China Double View Wood Chitofu Nehovhoni Mugadziri uye Mutengesi | Ndarama yegoridhe
Zvinhu: Simbi Plate
Saizi: 67.5 * 38 * 62 cm
Kurema: 36.05 makirogiramu
Rudzi rwemafuta: Wood uye Pellet
Wood Stove Nehovhoni Tsananguro
Iri chitofu chehuni neovheni chinhu chehuni chemapellets hita yakagadzirwa uye yakavakirwa mashandiro, pasina mutengo wefrills. Gonhi remoto girazi remoto rinopa nzvimbo yakakura yekutarisa, kuti ugone kunakidzwa nekujeka kwemoto unoputika. Musuwo wehovhoni unowanikwa zvakare musarudzo yegirazi, kuti iwe ugone kuona zvinhu zvako zvakabikwa usina kuvhura musuwo uye kuisa panjodzi mukudonha mumakeke ako anonaka nezvingwa. Yakakura sandara pamusoro yekubikira inosvika kusvika kumadhigirii mazana matanhatu, iyo yese chitofu chinopisa huni kupurinda yakanyanya tembiricha inodzivirira kupfeka, usanetseke nezvekukuvara kwenzvimbo huru. Grates iri mubhokisi remoto inobvumira mweya kuti usvike huni kubva pazasi kuti unyatso kutsva uye kubvisa dota kunyangwe moto uchiri kupisa.
Yese huni chitofu uremu zviri nyore kutakura. Marginal chimney pombi yekuwedzera yekubika nzvimbo. Hapana mubvunzo nezvazvo, edu anopisa-anotengesa zvinopisa huni zvekutengesa nemakumbo ekupeta akavakirwa kuti agare. Nekudziya uye kugona kwekubika, iri chitofu chinopisa huni ndiyo yekupedzisira "tyisidziro mbiri." Yakakwana kuseri kwemba, kunze-zvivakwa uye zvimwe. Inochengeta kofi uye sosi pani inopisa pamusoro, inounza mvura kumota uye inobika bhekoni nemazai!
Chitofu chehuni NeOven Details
Chinyorwa: Simbi Plate
Miganhu: 675W * 380D * 620H mm
Zviyero zvebhokisi 700W * 400D * 640H mm (Yekuchengetedza cage ngarava zvakasiyana)
Flue Pipe Saizi: 100 mm
Zvekuwedzera Zvinokurudzira: Zvekuwedzera zvekushandisa zvekushandisa, tinokurudzira zana mamirimita chimneys. Kutanga kuri nyore, ingori murombo moto gel kana marasha akareruka pamapellets uye akareruka nematch, hapana Inooneka Utsi.
Chitofu chehuni Nehovhoni Mifananidzo
Pashure: Wood Burner Heater Ine Inotakurika BBQ Grill
Zvadaro: Lightweight Camping Stainless Wood chitofu Tende
Bindu Wood Chitofu
Wood Chitofu Kunze
Chitofu chehuni Neovheni
Tende Wood Inopisa Chitofu, Camping Stove Mvura Tangi, Musasa Wood Burner, Bindu Kubika Chitofu, Stainless simbi chitofu, Kunze Kwehuni Kunopisa,